Halis weyn oo dhaqaalaha Soomaaliya uga soo wajahan Itoobiya - Awdinle Online
Halis weyn oo dhaqaalaha Soomaaliya uga soo wajahan Itoobiya
November 15, 2019 (Awdinle Online)- Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Itoobiya, madaxa mashruuca korontadhalinta Itoobiya Dr. Abraham Belay ayaa Khamiistii sheegay in mashruucii biyaxireenka Genale Dawa III oo soo bilaawday 2010 uu dhammaad yahay, uuna ku hawlgeli doono laba bil gudahood. Biyaxireenkaan oo laga sameeyey wabiga Jubba oo gudaha Itoobiya looga yaqaanno Genale Dawa ayaa wuxuu saameyn xun ku yeelan doonaa biyaha Jubba oo ah wabiga ugu biyaha badan Soomaaliya.
Wabiyada Jubba iyo Shabeelle oo ah isha koobaad ee biyaha Soomaaliya waxay ka soo burqadaan dhulka sare ee buuraleyda Itoobiya, taas oo micnaheedu tahay in dhanka biyaha ay Soomaaliya ku tiirsan tahay Itoobiya. Jubba iyo Shabeelle waxay waraabiyaan beeraha oo ah isha koobaad ee dhaqaalaha Soomaaliya. Warbixin ay 2018 daabaceen Bangiga Aduunka iyo hay’adda FAO ee cunnada iyo beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobay waxay ku sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya uu 64% ka ku tiirsan yahay waxsoosaarka beeraha dalka.
Itoobiya iyo Masar oo aan xuduud laheyn waxaa hadda ka dhex taagan xiisad ka dhalatay biyaxireen ay Itoobiya ka sameyneyso webiga Niil oo ay Masar diiddan tahay, maadaama uu biyaxireenkaasi cuuryaamin doono biyaha wabiva Niil oo ay Masar ku tiirsan tahay. Haddii aysan Soomaaliya maanta Itoobiya kala heshiin arinkan waxay dhaawici doontaa dhaqaalaha Soomaaliya, waxayna sabab u noqan kartaa dagaal cunnada iyo biyaha ah oo mustaqbalka dhex mara Soomaaliya iyo Itoobiya, maadaama ay wabiyadu yihiin isha koobaad ee cunnada iyo biyaha Soomaaliya. Soomaaliyeey toos.
Previous articleGuuleed oo Madaxda dalka uga digay Muddo kororsi
Next articleQeybta 2aad ee Taariikhda Taxanaha Golayaashii Sharci-dejinta ee dalka.